China Face Roller Massager-02 Kugadzira uye Fekitori | Wangtong
Pink kristaro inonyanya kugadzira moyo chakra, inosimbisa moyo nemapapu hutano hutano. Inogona kuzorodza kusagadzikana, kubvisa kushatirwa, kubatsira kubatsira kudzika mukati memoyo, kuzvitsvaga nekuvandudza kunzwisisika .Pink kristaro, ine hunyoro uye inokwezva pink kupenya, inogona kubatsira kuvandudza hukama hwehukama uye kusimudzira pachako uye bhizinesi kubatana.
Iyo jade roller zvinhu zvinobatsira ganda kuti rirambe riine hutano, nokudaro richizadzisa mhedzisiro yekuunyana kubvisa, kuchembera kuramba, kumeso kwechiso, kusimbisa
Rudzi rweiri roller irikuchekesa mhasuru lymph yenzvimbo yechiso mushure mekushandira pamwe kwemasaji, gadzira ganda rinochengeta rakasimba. Pamusoro pekukwiza muviri, kutarisirwa kweganda kunogona zvakare kushandisa roller kuti ikurumidze kunwiswa, kana iwe uchienda kunze kunogona kutora iyo essence capsule, ine roller roller kupinda mukati meiyo essence.
Basa guru rejade roller kusimudzira kutenderera kweropa kumeso, kukwiza iyo lymphatic system, kubatsira maseru metabolism, zvakare kunogona kudzora kuzvimba, kugadzirisa kugadzikana kweganda.
Kana kukakavara kweganda kuchisimudzira kutenderera kweropa, kuitira kuti ganda ribudirire pane rakatetepa kumeso.
Matipi: Usati wagadzirisa, ita basa rakanaka rekuchenesa horny.
Iwe unogona zvakare kushandisa inodziya mvura kunyorova, kuburikidza neyakaipisisa kuitisa kwejade, simbisa kutenderera kweropa.Collocation yekuchengetedza zvigadzirwa zvigadzirwa, zvakare inogona kuve iri nani yekumwiwa kwekuchengetedza zvigadzirwa.
Pamusoro pezvo, ine bhodhi rekukwikwidza, pamusoro pekukwiza kumeso, rinogona kushandiswa sekutsvaira ruoko, rine simba rekubvisa detoxification. mai pfuma.
Ichi chigadzirwa chemhando yepfuma, kunyangwe vadzidzi, vashandi vemuhofisi, kana amai vanokoshesa, zvakakodzera chaizvo
Iko kushandiswa kwejade roller, uye isu tinoshandisa zvimwe zvigadzirwa zvekunaka zvakafanana, tisati tashandisa iko kwekutanga kwekukwiza kirimu kana zvigadzirwa zvemafuta ekuzora paganda, kudzora kudhonza paganda.
Tevere tanga kubva panzvimbo yeclavicle, kubva pazasi kusvika kumusoro, zvishoma nezvishoma enda kune chirebvu nemutsipa, zvinoenderana nekurairwa kwebhiriji remhino, muromo, matama, huma, uye pakupedzisira simbisa kiyi muziso.
Paunenge uchikwiza muviri, kutenderera nzira kunofanirwa zvakare kuchengetedza kumusoro uye kwekunze nzira, dhonza kumeso kudzivirira kudhonza pasi kuti ubudise mitsara yakanaka.
Jade kukwesha bhodhi kunogona kukubatsira iwe uine chakatetepa kumeso.
Uye zviri nyore kutakura, chero nguva uye chero kupi kwazvinogona kushandiswa, kugara kwenguva refu kunogona kuburitswa kukwiza mutsipa nebendekete, kuzorodza muviri nepfungwa, rega iwe usununguke kunakirwa kwemuviri nepfungwa.
Zvadaro: Kumeso Roller Massager
Kumeso Roller Massager